बिज्ञान-प्रबिधि – Nepal24News
Mar142018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
युवा पुस्तामाझ स्टकुटर लोकप्रिय : ‘पावरफुल’ स्कुटरको माग बढ्दो
काठमाडौं । जसरी स्कुटर मार्केट बढिरहेको छ, त्यसरी नै ग्राहकको मागसमेत बढिरहेको छ । युवा पुस्तामाझ स्टकुटर लोकप्रिय भइरहेको छ । यही कारणले कम्पनीहरू ‘मस्कुलर’ स्टाइलवाला स्कुटरमा मात्र होइन, पावरको मामलामा समेत काम गरिरहेका छन् । १००–११० सीसीका इन्जिनलाई बढाएर १२५ र १५० सीसीका स्कुटरसमेत बन्न थालेका छन् । स्कुटरको संसार परिवर्तन भइनै रहेको छ । सोही कारण कम्पनीहरूले स्कुटरमा स्टाइलसँगै पावरलाई समेत प्राथमिकता दिएर आफ्ना उत्पादन बजारमा ल्याइरहेका छन् । स्कुटर मार्केट तीव्र रूपमा परिपक्व हुँदैछ । जसरी १०० सीसीवाला मोटरसाइकलपछि पल्सर र सीबीजेडजस्ता मोटरसाइकलहरुले एक नयाँ प्रिमियम सेगमेन्टको सुरूवात गरेका थिए । त्यसैगरी स्कुटर सेगमेन्टमा समेत परिवर्तन आइरहेको छ । आगामी दिनमा केही पावरफुलका साथै निकै स्टाइलिस स्कुटर सार्वजनिक हुने तयारीमा रहेको बताइएको छ । ती स्कुटर पावरफुलमात्रै होइन, लुक्
Mar112018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
सोसल नेटवर्किङ साइट फेसबुक हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । तर यो कहिले काँही हाम्रो लागि समस्याा पनि बन्नसक्छ । हाम्रो नीजि जानकारी फेसबुकमा हुने भएका कारण मानिसहरुले यसको गलत फाइदा उठाउने गर्दछन् । यस्तोमा हामी तपाईंलाई फेसबुकमा हाल्न नहुने ११ कुराबारे जानकारी दिँदैछौंः फोन नम्बरः मोबाइल नम्बर तुरुन्त हाइड गर्नुहोस् । फेसबुक पेजमा कहिले पनि फोन नम्बर नहाल्नुहोस् । मानिसहरुले यसका गलत फाइदा ढिलो चाँडो तपाईंबाट उठाउनेछन् । जन्मदिनः ह्याकरले तपाईंको जन्मदिनले नै तपाईंको नीजि जिन्दगीमा खलबली मच्चाइदिन सक्छन् । यसमार्फत उनीहरु तपाईंको बैंकसम्म पुग्नसक्छन् जसका कारण तपाईंले निकै समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । वास्तविक साथीलाई मात्र फेसुबकमा प्रवेशः अपरिचित मानिसहरुको फ्रेन्ड रिक्वेष्ट कहिले पनि असेप्ट नगर्नुहोला । आफ्नो चिनजानका साथीलाई मात्र यहाँ राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ । रिलेसनश
Mar82018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
वैज्ञानीकद्धारा सौर्य आँधी आउने भन्दै दियो यस्तो डर लाग्दो चेतावनी
एजेन्सी । बैज्ञानीकहरुले एक चेतवानी दिएका छन् । विश्वभरीका मानिसहरु सचेत रहन अपिल गरेका छन् । यही समयमा सूर्य बाट खतरनाक आँधी आउँने सम्भावना छ । यसले विश्वभरीकै बिजुली ग्रिड बंद गरिदिनेछ । र संसार अध्यारो हुनसक्छ । यसैले सबै मानव जाति सचेत हुन जरुरी छ । पूर्व तयारीमा रहन जरुरी छ भनेर वैज्ञानिकहरुले चेतवानी पेस गरेका छन् । ब्रमाण्डमा निक्कै ठूलो मात्रामा विकिरण मडारिरहेको छ । त्यही विकिरण सौर्य आँधीको रुपमा पृथ्वीमा खस्न सक्ने बैज्ञानिकको तथ्य छ । वैज्ञानिकका अनुसार सूर्यको सतहमा एक गहन द्रव्यमान निक्लिरहेको छ । यही सतह खाली गर्नका लागि सूर्यले लाखौँ सुपरचार्ज भएका कणहरु पृथ्वीमा फाल्दैछ । उक्त तूफानको संकेत हिँजो रातिको अनौठो चमकदार उत्तर तर्फको प्रकाश भएको बैज्ञानीकहरुका दावी छ । यस्तो अवस्थामा वैज्ञानीकहरुले शक्तिशाली कण पृथ्वीको प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र र वायुमंडलबाट सम्ब
हरेक महिना करिब दुई हजार बढीको हाराहारीमा साइकलको बिक्री हुँदै आएको नेपालगन्जमा हाल आएर नेपालमै पहिलो पटक आधुनिक किसिमको ‘बुलेट साइकल’ को बिक्री पनि यहाँबाट सुरु गरिएको छ । नेपालगन्जमा साइकलका लागि अग्रणी मानिएको बीबी साइकलले आफ्नै ब्रान्डको बुलेट साइकल यहाँ भित्र्याएर बिक्री सुरु गरेको हो । साइकलमा ३ सय ६५ भेराइटीको सेवा दिइरहेको दाबी गर्दै आएको बीबी साइकलका प्रबन्ध निर्देशक मोहम्मद सरिफ बागवानले भने, “बुलेट साइकल नेपालगन्जका लागि मात्र नभई नेपालकै लागि नयाँ भेराइटी हो ।” बागवान साइकलका नाममा ब्रान्ड स्थापित गरेको बुलेट साइकलबारे पत्रकारसँग कुरा गर्दै बागवानले सो साइकलको बिक्री सुरु गरेर बजारमा पठाइएको बताए । “औपचारिक रूपले लन्च गरेर बिक्रीका लागि सबैतिर पठाइएको छ,” बीबी साइकल शोरुम बाहिर आफैं साइकल चलाएर बुलेट साइकल लन्च गरेका मो. सरिफले भने, “यो साइकल सबैको राजाका रूपमा स्थापित
महिलाहरुका लागि सार्वजनिक शौचालयको प्रयोग साँच्चीकै कष्टकर हुन्छ । सार्वजनिक शौचालय फोहोर हुने हुनाले बसेर पिसाब फेर्नुपर्ने महिलाका लागि संक्रमण तथा जिउमा फोहोर लाग्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले धेरै महिलाहरु सार्वज्निक शौचालयमा पिसाब नगरी पिसाब रोकेरै बस्न जाती मान्छन् ।काठमाडौं डेली महिलाहरुको यो समस्यालाई ध्यानमा राख्दै अष्ट्रेलियाको ग्रिन पार्टीले महिलाहरुलाई उठेर पिसाब फेर्ने तालीम दिँदैछ ।समाचार अनुसार एउटा विशेष खालको सामानको सहयोगले महिलाहरुले उठेरै पिसाब फेर्न सक्दछन् । सोही विशेष किट कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने तालीम ग्रिन पार्टीले दिइरहेको छ । यो सामान नली आकारको हुन्छ । जसलाई महिलाहरुले आफ्नो मुत्रांगमा राखेर पिसाब फेर्न सक्दछन् । यसरी फेरेको पिसाब उक्त नली हुँदै ट्वाइलेट सम्म पुग्दछ ।काठमाडौं डेली प्रयोग गरिसकेपछि यो नलीलाई फ्याँक्न सकिन्छ । यो नलीको प्रयोगपछि महिलाहरुलाई फोहोर
अब चन्द्रमामा मोबाइल नेटवर्क, चल्ने भयो फोर जी
विश्वका कैयन् भागमा अहिले पनि मोबाइल फोनको नेटवर्क उपलब्ध छैन । तर वैज्ञानिकहरु चाहिँ चन्द्रमामा मोबाइलको नेटवर्क पुर्याउन जुटेका छन् ।आगामी वर्ष इतिहासमै पहिलोपटक चन्द्रमामा मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध हुने भएको हो । यदि त्यसो भएमा चन्द्रमाबाट पृथ्वीमा हाइ डेफिनिसन भिडियो स्ट्रिमिंग सम्भव हुनेछ । भोडाफोन जर्मनी, नोकिया तथा अउडी कम्पनीले चन्द्रमामा मोबाइल नेटवर्क पुर्याउने छन् । कम्पनीहरुका अनुसार, चन्द्रमामा मानव पाइला पुगेको ५० वर्षपछि उनीहरुले चन्द्रमामा मोबाइल नेटवर्क पूर्याउने यस मिसनमा काम सुरु गरेका छन् । भोडाफोनका अनुसार यस कामका लागि नोकियालाई टेक्नोलोजी पार्टनरको रुपमा राखिएको छ र नोकियाले स्पेस ग्रेड नेटवर्कको विकास गर्नेछ । यसमा एक सानो हार्डवेयर तयार गरिनेछ जसको आकार एउटा सानो प्याकेट जत्रै हुनेछ । यस परियोजनामा बर्लिनस्थित पिटीसाइन्टिस्ट कम्पनीको पनि सहकार्य रहेको छ । भोडा
Feb132018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
KL टावरमा VALENTINE DAY को अफर एउटा मोबाइल किन्दा अर्को सित्तैमा
काठमाडौं। भ्यालेन्टाइन डेको अवसर केएल मोबाइल हबले एउटा मोबाइल किन्दा अर्को एउटा मोबाइल सित्तैमा दिने अफरसहित मोबाइल मेला सुरु गरेका छन् । एउटा मोबाइलको खरिदमा जोडीलाई नै मोबाइल पाउने अफर ल्याइएको छ। चाबहिल चुच्चेपाटीस्थित केएल टावरको भुँई तल्लामा रहेको मोबाइल हबले हरेक मोबाइलको खरिदमा हात खाली नजाने एक्सक्लुसिभ अफरसहित अफर भित्र पनि अफर नामको मोबाइल मेला आयोजना गरेको हो । फेब्रुअरी १३ देखि १५ दिनसम्म चल्ने मोबाइल मेलामा मोबाइल खरिद गर्नेले एउटा मोबाइल किन्दा सित्तैंमा अर्को एउटा मोबाइल पाउने छन् । मोबाइल हबले हात खाली नजाने उपहारहरु पनि ग्राहकलाई वितरण गर्नेछ । मेलामा मोबाइल खरिद गर्दा मोबाइल हबले अनिवार्य रुपमा एफक्युब सिनेमाको टिकट, क्लब डेजाबुमा ४ हजार रुपैयाँ बराबरको २ जनालाई प्रवेश कुपन प्रदान गर्ने जनाएको छ । मोबाइल हबले मेला अवधिभरी विभिन्न किसिमका खेल तथा अफरहरु पनि सञ्चालन ग
Feb92018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
होसियार !!! फेसबुक म्यासेन्जरबाट येस्तो भाइरस फैलिदैछ , होसियार हुनुहोस,भाइरसबाट बच्न यसो गर्नुहोस..
तपाईं फेसबुक च्याटमा रमाउनुहुन्छ भने सावधान हुनुहोस् है । फेसबुक च्याट म्यासेन्जरमार्फत अहिले भाइरस र मालवेयर फैलिँदैछ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको म्यासेजिङ एप फेसबुक म्यासेन्जर मालवेयरको सिकार भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । फेसबुक म्यासेन्जरको माध्यमबाट भाइरसको लिङ्क फैलिरहेको क्यासपरस्की ल्याबले जनाएको हो । ल्याबको रिपोर्टका अनुसार म्यासेन्जरमा भाइरस भएको लिङ्क साइबर अपराधमा संलग्न व्यक्तिले पठाएका छन् । फेसबुक म्यासेन्जरको माध्यमबाट भाइरसको लिङ्क फैलिरहेको क्यासपरस्की ल्याबले जनाएको हो । ल्याबको रिपोर्टका अनुसार म्यासेन्जरमा भाइरस भएको लिङ्क साइबर अपराधमा संलग्न व्यक्तिले पठाइरहेका छन् । फेसबुक म्यासेन्जर मार्फत द्रुत गतिमा फैलिरहेको यो भाइरसले मोबाइल तथा कम्प्युटरमाथि आक्रमण गर्नुका साथै डिभाइसको सिस्टम निष्क्रिय बनाउने गर्दछन् । त्यति मात्र होइन यो भाइरसले डि
Feb72018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
नेपाल टेलिकमले पनि सुरु गर्यो ‘ब्यालेन्स सापटी’ दिन
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्ना प्रिपेड ग्राहकको लागि ब्यालेन्स सकिँदा सापटी दिन सुरु गरेको छ । टेलिकमले आफ्नो १४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ‘नमस्ते क्रेडिट सेवा’ नाम दिएर यस्तो सुविधा ल्याएको हो । प्रिपेड कार्डबाहक ग्राहकले अब फोन गर्दा गर्दै पैसा सकिएमा पनि कुरालाई निरन्तरता दिन पाउने छन् । यसअघि नेपालमा सञ्चालीत अर्को टेलिकम्युनिकेसन् कम्पनी एनसेलले मात्रै सापटी दिने सेवा दिएको थियो । एनसेलले सापटीलाई अहिलेका युवा पुस्ताले खुबै रुचाएका छन् । टेलिकमको प्रतिस्पर्धि मानिने ऐनसेलले यो सेवा सुरु गरेको लामो समयसम्म टेलिकमले यसमा चासो देखाएको थिएन । युवा पुस्ताले यस्तो सेवा खुबै मनपराएको देखेपछि टेलिकमले पनि त्यसैलाई पछ्याउँदै ‘पैँचो’ लिने सेवा सुरु गरेको छ । सोमबार टेलिकमले आयोजना गरेको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सेवाको सुरूआत गरे । यो योजनाको पूर्ण कार्यान
यसरी लुकाएर राखिएको हुन्छ वाइफाईको पासवर्ड, सजिलै थाहा पाउने तरिका सिक्नुहोस…
अहिलेको हाईटेक लाइफमा सबैसँग समार्टफोन हुन्छ । र मोवाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले प्रदान गर्ने २ जी, ३ जी, फोर जी तथा वाईफाईमार्फत इन्टरनेटको प्रयोग नहुने त कुरै भएन । यस्तोमा कुनै पब्लिक (सार्वजनिक) वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लाग्यो भने त मज्जा नै हुने भयो । प्राय कलेज, सपिङ सेन्टर, सिनेमा हल, तथा होटेलहरुमा वाईफाई खुला रहन्छ । अर्थात् यदि यस्ता ठाउँमा जडित वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लाग्यो भने त तपाईको काम झन सजिलो हुने नै भयो । यो पनि पढ्नुहोस् – विचित्रको आविष्कार,फोल्ड गर्न मिल्ने वाईफाई स्कुटर( भिडियो सहित) सार्वजनिक वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लगाउन के गर्ने त ? यो आलेखमा हामीले केही यस्ता मोवाइल एपबारे उल्लेख गरेका छौं, जसको प्रयोगबाट तपाईलाई सार्वजनिक वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लगाउन मद्दत पुग्ने छ । बेस्ट वाई–फाई नेटवर्क ह्याकर यो एप बनाउने कम्पनीको दावी छ कि वाईफाईमा राखिएको जस्तोसुकै पा